रक्षामन्त्रीलाई यसरी पर्‍यो लाखौं उपचार खर्चको ‘चिठ्ठा’....... - Bagaicha.com
रक्षामन्त्रीलाई यसरी पर्‍यो लाखौं उपचार खर्चको ‘चिठ्ठा’…….
RK २८ माघ २०७४, आईतवार १९:५४
२८ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकार पछिल्लो समय निकै ‘दानी’ देखिएको छ । हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता, शहीद घोषणा वा कुन न कुनै बहानामा आर्थिक सहयोग दिने निर्णय भटाभट गरिहेको छ ।शुक्रबार त रक्षामन्त्री भीमसेन दास प्रधानलाई उपचार खर्चका लागि लाखौंको चिठ्ठा नै पर्‍यो । कांग्रेस नेता प्रधान मुटुरोगबाट पीडित छन् । ७ वर्षअघि हृदयघात भएपछि दुई दिनसम्म अचेत भएका थिए प्रधान । त्यतिबेला थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराएका प्रधानलाई डाक्टरहरुले ‘पशुपतिनाथले जोगाएको’ भने । उनको मुटुसँग जोडिएको रक्तनलीमध्ये दुईवटा पुरै टालिएको छ, एउटाले मात्र सामान्य काम गरेको छ । शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका चिकित्सक डा.अरुण मास्केले उपचारका लागि जापान जान सुझाव पनि दिएका थिए । तर, सरकारले दिएको लाखौंको उपचार खर्च न उनले मागेका थिए न त उपचारमा जाने कुनै योजना नै थियो । आकस्मिक रुपमा आइलाग्यो उपचार खर्च ।
अरुकै विषय उठाउँदा आफ्नै निर्णय
मन्त्री प्रधानका अनुसार कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद रामकृष्ण ताम्राकारले ब्लड क्यान्सरको उपचार गर्न असोजमा सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग गर्दै निवेदन दिएका रहेछन् । तर, लामो समयसम्म कुनै निर्णय भएन । कांग्रेसका केही नेताहरुले मन्त्री प्रधानलाई भेटेर ‘यो फाइल प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेको छ, तपाईले पनि पहल गरिदिनू है’ भने । दुई हप्ताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा रक्षामन्त्री प्रधानले तामाकारको फाइलबारे कुरा उठाए । उहाँलाई पैसा किन नदिएको भन्दै उनी अलि कडि्कएका थिए । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फाइल गृह मन्त्रालयबाटै आउन बाँकी रहेको जवाफ दिए । मन्त्रीप्रधानले प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्री भएपछि के बाँकी रहृयो भने । तर मुख्यसचिवले गृहमन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्‍याउन बाँकी रहेकाले दिन नमिल्ने दोहोर्‍याए । उहाँले आउनुपर्ने प्रोसेस बाँकी नै छ भन्नुभयो,’ मन्त्री प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अचानक मलाइ के आयो, के आयो, म रक्षामन्त्री, मलाई यस्तो समस्या छ, मसँग पैसा छैन भनेँ । ए तपाईंको छ (आर्थिक सहयोग माग गरेको निवेदन) नि है ! जानुस् जानुस् भनेर सबैले भने । त्यो क्याबिनेट बैठकले मन्त्री प्रधानलाई २५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गर्‍यो ।
‘मिडियाले लेख्छन् भनेर चुप लागेँ’
सरकारले उपचार खर्च दिने भएपछि रक्षामन्त्री प्रधानले जापानको सोनान तामाकुरा जनरल अस्पतालबाट आफ्नो उपचारमा लाग्ने खर्च विवरण मगाए । डाक्टरले इमेलमार्फत ३७ लाख रुपैयाँ जत्ति खर्च हुने जानकारी दिए । लगतै शुक्रबार सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो, रक्षामन्त्रीलाई २५ लाख होइन, उपचारमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने । ‘म चेक लिन्न । हस्पिटलमा जति पैसा खर्च हुन्छ, जापानको एम्बेसीले तिर्नुपर्छ भनेको छु’ प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने ‘क्याबिनेटले निर्णय पनि यसैगरी गरेको छ । मन्त्री प्रधान सानासाना विषय पनि मिडियामा आउने भएकाले सरकारबाट उपचार खर्च लिन नखोजेको बताउँछन् । ‘धेरै पैसा लाग्दैन भन्ने ठानेको थिएँ, फेरि सबै कुरा मिडियाले लेख्छन् भनेर पनि नभनेको हुँ’ उनले भने, ‘तर, रामकृष्ण ताम्राकारको विषय उठाउँदा उठाउँदा आफ्नै विषयमा पो निर्णय भयो । डाक्टरले ‘समयमा उपचार नगराए पछि समस्या हुन्छ, भर्‍याङ चढ्न ओर्लन पनि गाह्रो हुन्छ’ भनेकाले पनि सरकारी खर्चमा उपचार गर्न लागेको उनले बताए ।
‘उपचार गर्न पुग्ने मेरो सम्पत्ति छैन’
मन्त्री प्रधानमन्त्री काठमाडौंका रैथाने हुन् । उनले मन्त्री भएपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि ७ थान हिरा, २० तोला सुन र ७ केजी चाँदी रहेको उल्लेख छ । श्रीसम्पत्ति भएका मन्त्रीले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भने जस्तै उपचार खर्च लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । रक्षामन्त्री प्रधान भने आफू विगतदेखि नै सचेत भएर राज्यस्रोतको प्रयोगमा सचेत रहेको दाबी गरेका छन् । ‘बाहिर दीपक मनाङेले चुनाव जित्छन्, भ्रष्टाचारीले जिते पनि केही आउँदैन । यहाँका मान्छे कन्सस छन्, केही भए समचार आउँछ भनेर मैले २०७० सालमा सांसद हुँदादेखि उपचार सुविधा लिएको छैन,’ उनले भने । आफूसँग काठमाडौंमा ६ आनामा बनेको सगोलको घरबाहेक केही नभएको पनि उनले दाबी गरे । ‘मैले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण राम्रोसँग हेरे थाहा हुन्छ, मेरो नाममा कुनै सेयर पनि छैन, बैंकमा भएको तलब मात्र हो’ उनले भने ।